विवाहको २७ औं दिनमा पोखराकी बिनिताको रुपन्देहीमा मृत्यु,कन्यादान गरेर पठाएकी छोरीको शव बुझ्न बोलाउँदा… - tilottamacitynews
विवाहको २७ औं दिनमा पोखराकी बिनिताको रुपन्देहीमा मृत्यु,कन्यादान गरेर पठाएकी छोरीको शव बुझ्न बोलाउँदा…
तिलोत्तमा सिटी - 2021 Jun 01 08:42 PM Tweet
जेष्ठ १८ गते मंगलबार २०७८ तिलोत्तमा सिटी।जसले आफू बेहुली सिंगारिने कपडा–लत्ता, श्रृंगार–पटारका सामग्री आफैले रोजी–रोजी खरिद गरिन् । बेहुलालाई लगाई दिने स्वयम्वरको औंठीदेखि दाइँजोसम्म आँफै किनेर आफ्नो विवाहको तयारीमा आँफै जुटिन् । गत वर्षको कार्तिक–मंसिर महिनामै मगनी भएका जोडीसँग विवाह गर्ने तयारीमा थियो तर, त्यति बेहुलाका हजुर बुवाको मृत्यु भएका कारण विवाह रोकिन पुगेकी थियो । त्यसैले यसपाली लगनको महिना बैशाखमा विवाहको तयारी गरिएकोमा भ्याई–नभ्याई थियो । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्वर–११ मद्रानी घाईघाटकी पार्वती गौतमले कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–२२ , पुन्धीगुन्धी दोबाटो निवासी २३ वर्षिया बिष्णु बराल (क्षेत्री ) लाई मगनी गरि दिएकी थिइन् रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका बर्माचोकदेखि करिब दुई सय मिटर भित्र घर भएका ३० वर्षियप्रदिप भट्टराईसँग ।
गत वर्ष मगनी भई सकेपछि उनीहरुबीच भेटघाट , कुराकानी हुँदै नजिकको सम्बन्ध झाङ्गिदै गइसकेको थियो । हुनेवाला बेहुला पोखरास्थित हुनेवाला ससुरालीमा पनि जाने आउने गर्दै आएका थिए । प्रदिप भट्टराई त्यस घरका एक मात्र छोरा हुन् । लामो समय मुम्वई बसेर आएका , घर परिवार पनि राम्रै । उनी पनि खाइलाग्दो आकर्षक युवा । यसर्थ हुनेवाला बेहुली बिष्णुृले हुनेवाला बेहुलालाई आफ्नो जीवनसाथीका रुपमा मन–मस्तिष्कमा सजाई सकेकी थिइन् । शरिरको नशा–नशा र कण–कणमा भिजाई सेकेकी थिइन् ।जसका कारण विवाह पूर्व नै उनी प्रदिपलाई भेट्न समेत आएकी थिइन् । उनकी आफन्त र एकदम नजिककी साथी मद्रानी गाइघाटकी अर्चना गौतमका अनुसार उनले प्रदिपलाई दिने मायाको सिमा थिएन । तर, प्रदिप कम बोल्ने र बेला बेलामा झर्किने गर्दथे । कहिले काँही झडगा गर्दै मैले तिमीलाई विहे गर्ने मेरा लगि होइन , घरमा आमा बुवा र दिदीकाका लागि हो भन्दै तिखो वचन लगाउने पनि गर्ने गरेको उनै बिष्णुकी साथी अर्चना गौतमको बुझाई छ । र, पनि बिष्णुमा उनीप्रतिको समपर्ण र जिवनसाथी बनाउने सपना , जप्न र तड्पन कायमै थियो । उनले गत वर्ष मगनी नहुनु अघिसम्म पोखराकै एक वित्तिय संस्थामा काम गर्थिन् । त्यसपछि त्यो जागिर छाडेर बसेकी थिइन् । पोखराकै पृथ्वी नारायण क्याम्समा स्नातक तेश्रो वर्षमा अध्यानरत बिष्णु त्यस घरका चार छोरीहरु मध्ये कान्छी छोरी हुन् ।
बेहुली बिष्णुलाई माइतीजनसँग लाउडस्पिकर ओपन नगराई बोल्न नदिने गरेको उनकी साथी अर्चना गौतमले बताइन् । फोन गर्याे भने विस्तारै सासैसासले बोल्ने गर्थिन् । उनको मोबाइल जति बेला पनि नववेहुला प्रदिपकै हातमा हुने गरेको बिष्णुले बताउने गरेको गौतमले बताइन् ।घरमा उनी माथी एकदम दमन हुने गरेको उनको बुझाई छ । उनी विवाह पश्चात् पोखरास्थित माइती घरमा धुर्पाईलो फर्काउन पनि जान पाइनन । रुपन्देही मै रहेकी सानीमाको घरमा धुर्पाईलो फर्काउन गएको माइतीजन बताउँछन ।जेठ १४ गते त्यस्तै बिहान १० बजेदेखि साढे १० बजेको बीचमा पोखरास्थित आफ्नी दिदी पवित्रा अर्याले वराल संग भिडियो कल गरिन र बहिनी बिष्णुले दिदीसँग निकै खुशी प्रकट गरिन् । दराजको कपडाहरु देखाउँदै मम्मीले जस्तै कसरी मिलाएर राखौं दिदी भनेर भनिन् । खै त ज्वाँई भनेर सोध्दा यहि हुनुहुन्छ भनिन् । ‘ त्यस दिन भिडियो कलमा उनको मुहारमा निकै खुशी र मुस्कान थियो ’– दिदी पवित्राले भनिन–‘ बहिनीमा खुशी देख्दा हामीहरु पनि खुशी भयौं ।’
त्यसरी खुशी प्रकट गर्दै दिदी र अन्य आफन्तसंग पनि फोनमा कुरा गरेकी बिष्णुको जेठ १४ गते दिउँसो दुईदेखि साढे दुई बजेको बीचमा निकै अप्रिय र अकल्पनिय दुःखद खबर आयो घरबाट माइती पक्षलाई । विवाहको २७ दिनको कुरा थियो त्यो । पहिला मगनी गर्ने पवित्रा गौतमलाई फोन आयो । उनी भन्छिन्–‘ पहिला बिष्णुलाई पखला लागेको छ भनियो । मैले पखला लागेको मान्छेलाई अस्पताल लैजानेकी हामीलाई भेट्न बोलाउने ? भनेर झर्किएँ । पछि त घरको माथिल्लो कोठामा आफ्नै सलको पासो लगाई झुण्डिएर मृत्यु भयो ।’ भने पछि हामी छाँगाबाट खसे झैं भयौं ।घरको माथील्लो तल्लामा श्रीमान श्रीमती सुत्ने कोठा खुल्ला छ । संगैको कोठामा श्रीमान मोवाईल खेलाउँदै बसेको बताइन्छ । माथि कोठामा गएर हेर्दा झुण्डिएको देखे पछि आफूहरुले पासो फुकाएर मुखमा पानी राखी दिएको परिवारले जनाएको गौतमले बताइन् । उनी भन्छिन–‘ दिनको दुई,साढे दुई बजे घरमा खाजा नास्ता बनाउने बुहारीको समय थियो । त्यसबेला परिवारले बुहारीलाई किन खोजेनन् ? मनमा पीडा र तनाव भई दिएको भए केहि बेर अघिसम्म माइतजन, दिदी–बहिनीहरुसँग किन खुशी साट्थिन् ? यस्तो सवाल पनि माइतीजनले उठाएका छन् ।
मगनी गरी दिने गौतमदेखि उनका हरेक माइतीजनले उनी आफँैले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने कुरा स्वीकार्दै स्वीकारेका छैनन् । गौतम भन्छिन–‘ उनी आफै आत्माहत्या गरेकी भनेर त हामी एकरत्ती पत्याउन सक्दैनौं । रहश्यमय रुपमा उनको विवाह भएको २७ दिनका दिन ज्यान गएको छ । सत्यतत्य छानविन र न्यायका लागि सञ्चार माध्यमले आवाज उठाई दिन पर्यो ।’यस सम्वन्धमा मृतकका घर परिवार संग सम्पर्क राख्दा विवाहको २७ दिनमै विदुर बनेका प्रदिप भट्टराई घर देखि बाहिर गएको परिवारजनले बताए । त्यस पछि उनकी फुपुसँगग कुराकानी भयो । प्रदिपको आमा बुहारीको मृत्युले बेला बेलामा अचेत हुने र पानी छ्यापेर जगाउने गरेको उनले बताइन् । त्यस पछि उनै आमा कुर्तु भट्टराईसँग कुरा गर्न सुरु गरे पछि उनी रुँदै आफूहरु ठुलो शोक–पीडामा रहेको बताइन ।उनले भनिन–‘ अष्टे«लियामा रहेकी मेरी छोरी प्रविणा भट्टराई कार्की र मेरी बुहारीको पहिल्लैदेखि मेलमिलाप थियो । मेरी छोरीले बुहारीलाई असाध्धै माया गर्थिन । त्यस दिन दिउँसो बुहारीले आमा दिदीका फोटाहरु हैरौंन भनेर एल्बम मागिन् । उनी र हामी एलबमहरु पल्टाउँदै फोटाहरु हेर्दै थियौं । मेरो छोरा माथि कोठामा थिए । पानी आएको थियो । एकछिन पछि बुहारीले ए रेष्ट गर्छु है मम्मी भन्दै माथी रुममा सुत्न गइन् । त्यसको केहि बेर अर्को कोठामा बसेको मेरो छोराले किन मलाई बोलाईनन भन्दै हेर्न जाँदा झुण्डिएको देखेछन र अत्तालिदै र दौडिदै तल आए पछि हामी माथी हेर्न जाँदा झुण्डिएको देख्यौं । खुट्टा छाम्दा तातै भएकोले बचाउन सकिन्छ कि भनेर चुङ्गिको पासो फुकाई दिएर भुँईमा राखेर पानी खुवाउने गरेका हौं ।’
माइतीमा छँदा बिष्णु बरालका रुपमा चिनिने उनलाई बिवाह पश्चात् श्रीमानले नयाँ नाम विनिता भट्टराई राखि दिए । त्यही आईडिको फेशबुक पनि खोलियो । त्यस आईडीमा मृत्युको दुई दिन अघि विनिताले आफ्नी साथी अर्चना गौतमसंग च्याट कुराकानी गरेकी छन् । ए होर ? भनेर साथी अर्चनाले रिप्लाई गरेकी छन् । यो आइडी मैले भन्दा धेरै प्रदिपले युज गर्नु हुन्छ भनेर बिष्णुले भनेकी छन् । ए शोः भन्दै अंकलले त ( बिष्णुका श्रीमान ) ले त रिक्वेस्ट एकसेप्ट नै गर्नु हुन्न त भनेर अर्चनाले रिप्लाई दिएकी छन् । जुन हामीलाई प्राप्त भएको छ ।बिष्णु उर्फ विनिताका माइतीमा दाजुभाई कोही नभएकोले उनका आमाका भानिज पर्ने रुपन्देहीको तिलोत्तमा –६ गोरकट्टाका गोबिन्द क्षेत्रीले उनको सहोदर दाजुसरह विवाहको चाँजोपाजो मिलाउनमा प्रमुख भुमिका खेलेका थिए । ‘घरको एक मात्र छोरा राम्रै लाग्यो र मागेर आफुहरुले विवाह गराइयो ’– लकडाउन भएकोले रोकाईएको पार्टी प्यालेस पनि क्यान्सिल गरेर दुर्गामन्दिरमा लगेर विवाह गराइयो । तर, दुर्भाग्य बेहुली बनाएर बठाएको २७ दिनका दिन हामीले उनको शव पो देख्नु प¥यो ।’
यस सम्वन्धमा ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख एसपी प्रतिक सिंह राठौरको ध्यानकृष्ट गर्दा , आफु सहित प्रहरीको टोली घटना स्थलमा पुगेर मुचुल्का तयार पारिएको र पोष्टमार्टम रिर्पोट नआई सकेकोको बताउँदै प्रहरी अनुसन्धान जारि रहेको प्रतिकृया दिए । उनले ति महिलाको विवाह गरेको धेरै दिन नभएको र मृत्यु हुनुको केहि घण्टा अघि परिवारजनसँग नाचेर टिकटक बनाएर पोष्ट गरेको समेत पाईएकोले अरु कसैबाट तनाव सिर्जना गरिए जस्तो पनि नपाइएको बताए ।
छोरीज्वाँईसँगै बसेर कुराकानी गर्थे । कान्छी छोरी र घरको कान्छो विवाह मन फुकाएर खर्च गर्दै बेहुली सिंगारेर पठाईयो तर, मेरी छोरी धुर्पाईलो फर्काउन माइतपनि आउन नपाई हामीले विवाहको २७ दिनमा शव बुझ्न जानुप¥यो । दिदी पवित्रा अर्यालले पनि त्यस दिन बहिनीको मुहारमा त्यो खुशी सम्झीदै र डाको छाड्दै भन्छिन –‘ मेरो बहिनीले आत्मा हत्या गर्ने सक्दिनन्,उनी साहसी थिइन् । बहिनीलाई कसैले मारेर झुण्डाएको हुनु पर्छ , खोज तलास गरि दिने हाम्रा दाजु भाई कोही छैनन् , तपाईहरुले न्याय दिलाई दिनका लागि तपाईहरुले पहल गरि दिनुपर्यो। ’ साभार ग्लोबल आवाज